Marina Waxaa Lagu Kala Jaray Ellicott Taxanaha 370 Dredge - Ellicott Dredges
Source: Waxaa laga soo qaatay Daabacaadda khadka Toddobaadka-Khadka Tooska ah ee toddobaadlaha ah ee Bay
Deale waa deked ugu weyn Galbeedka Xeebta wicitaankeedu dhex maro Annapolis iyo Solomons. Laakiin si loo gaaro biyihii la ilaaliyay, barkaduhu waa inay dhaafeen Scylla iyo Charybdis. Ubaxyadii casriga ahaa ee daayeerradii Odyssean ayaa sababay doon badan.
Scylla, dhagaxa weyn, waa mashiinka dhagaxa 900-cagood ee ka ilaaliya dekedda waqooyiga. Haddii aad ka gudubto Scylla, weli waa inaad wax ka qabataa Charybdis. Wareeg ka socda waddankeeda Straits of Messina, Deale's Charybdis waa biyaha xeebta ee Rockhold Creek, kanaalka ku yaal deale deale
Scylla si adag ayey u xidideysan tahay, laakiin lixdii sanaba mar ama wixii ka dambeeya Ciidanka Corps ee Injineerrada ayaa la tacaalaya Charybdis, iyadoo ka qodeysa Rockhold Creek ilaa 7,000 oo fuudh laga bilaabo dekedda ilaa buundada Wadada 256. toddobo cagood oo qoto dheer.
Hadda, waa sida ugu yar ee cag iyo badh meelaha qaar, sida uu sheegayo Tom Wilhem, maareeyaha marinka ee Herrington Harbor North, oo ku taal wabiga. Marinada sida Herrington waxay marinayaan marinadooda marin.
Badmareenka Jack Hanse oo ka walwalsan dadkaas ayaa yidhi: "Kanaalka ayaa xumaanaya, dad badanina ma awoodi doonaan inay doomahooda ka saaraan."
Caawinta ayaa socota, sida uu sheegayo Congressman Steny Hoyer, oo ku daray nus milyanka doolar biilka Hindisaha Tamarta iyo Biyaha ee la ansixiyay sanadkii hore.
"Waxaan si adag isugu daynay inaan shaqada ku qabanno sida ugu dhakhsaha badan uguna macquulsan sababtoo ah waxay muhiim u tahay bulshada biyaha ee Deale," ayuu yiri Hoyer.
Laba shirkadood ayaa dalbaday, oo ay kujirto Koonfurta Maryland Dredging of Friendness.
Guuleystaha, Bay West Inc. ee St. Paul, Minn.
Qoditaanka 370, oo ay naqshadeysay oo ay dhistay Ellicott® Qeyb ka mid ah Baltimore Dredges waa ceel-biyood hiddo-wadayaal ah oo pontoon ah oo ka qaada qashinka isla markaana ku sii gudbiya dhuun dhuunta gaysa Xaaladdan oo kale, Herrington Harbor North waxay aqbalaysaa qaniimada qodan.
Waxaa laga soo qaatay Daabacaadda khadka Toddobaadka-Khadka Tooska ah ee toddobaadlaha ah ee Bay